दार्चुलाबाट २ सय टन खरी निकासी,, खरिबाटै ३ लाख बढी राजस्व संकलन ।।
स्टुडियो टाईम : ०३:०६
२०७५ श्रावण १० बिहीबार ०३:०६
गत आर्थिक वर्षमा दार्चुलाबाट २ सय टन खरी निकासी भएको छ । दार्चुलाको दुहूँ गाउँपालिका वडा नम्बर ५ धारीमा रहेको खरी खानीबाट उत्पादन गरिएको २ सय टन जिल्लाबाहिर निकासी भएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को झण्डै ५ महिनाको अवधिमा दुहू गाउँपालिका वडा नम्बर ५ स्थित खरी खानीबाट निकालीएको २ सय टन खरी गत असार महिनामा मात्रै २ सय टन खरी निकासी भएको छ । दुहूँको धारीस्थित खरी खानीबाट निकालीएको उक्त खरी निकासी गर्दा दार्चुला जिल्ला सदरमुकाम खलंगास्थित छोटी भन्सार कार्यालयले एकै महिनामा ३ लाख बढी राजस्व संकलन गरिएको छोटी भन्सार कार्यालय प्रमुख नरसिँह बडालले जानकारी दिनुभयो ।
यसरी दार्चुला जिल्लाबाट एउटै सामाग्रीबाट यति ठुलो परीमाणमा राजस्व संकलन गरिएको यो पहिलो पटक हो । जिल्ला सदरमुकाम खलंगास्थित छोटी भन्सार कार्यालयले एउटै सामग्री अर्थात् खरी निकासीबाट ३ लाख बढी राजस्व संकलन गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ असार महिनामा मात्रै खरी निकासीबाट छोटी भन्सार कार्यालयले ३ लाख बढी राजस्व संकलन गरेपछि वर्षकै सबै भन्दा बढी राजस्व असार महिनामा संकलन गरेको छोटी भन्सार कार्याय प्रमुख नरसिँह बडालले जानकारी दिनुभयो । असार महिनामा दार्चुला जिल्लाबाट खरी निकासी भएपछि छोटी भन्सार कार्यालय ३ लाख राजस्व खरी निकासीबाट र अन्य आयात निर्यात सामग्री बाफत गरी जम्मा ४ लाख ५४ ७ सय ९७ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरिएको छोटी भन्सार कार्यालय प्रमुख बडालले बताउनु भयो । गत आर्थिक वर्षमा अन्य महिनाअरुको कुल राजस्व संकलन भन्दा बढी असार महिनामा खरी निकासीबाटै राजस्व संकलन गरेको छोटी भन्सार कार्यालय दार्चुलाको तथ्यांकले देखाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा महिना भरी अन्य सामग्रीबाट सबैभन्दा बढी साढे तीन लाखसम्म राजस्व संकलन गरेकोमा असार महिनामा खरी निकासीबाटै ३ लाख राजस्व संकलन गरेको छ । असार महिनामा खरी निकासीबाटै ३ लाख राजस्व संकलन भएपछि वर्षभरीकै सबैभन्दा बढी असार महिनामा राजस्व संकलन भएको छ । गत आर्थिक वर्षको ७ महिनाको महिनागत राजस्व भन्दा भन्दा बढी असार महिनामा खरि निकासीबाटै राजस्व संकलन भएको देखिन्छ । खरी निकासीबाट ३ लाख राजस्व संकलन भएपछि वर्षभरीका अन्य महिनाहरुको तुलनामा असार महिनामा सबैभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छोटी भन्सार कार्यालय प्रमुख बडालको भनाई छ ।
प्रतिटनको १५ सय रुपैयाँका दरले २ सय टन निकासी गरेबाफत ३ लाख राजस्व तिरेको जीयो मिनिरल रिजर्भस प्रालि कञ्चनरपुका निर्देशक डा. सुरज प्रसाद भट्टले जानकारी दिनुभयो ।
जग्गाधनीलाई प्रतिटन ६० रुपैयाँ
गत वर्षको फागुन महिनादेखि खरी खानी उत्खनन गर्न थालेको जियो मिनिरल प्रालि कञ्चनपुलले जग्गाधनीलाई भने प्रतिटन ६० रुपैयाँ मुआब्जा दिने गरेको छ । निकासी गर्दा छोटी भन्सार कार्यालयलाई प्रतिटन १५ सयका दरले राजस्व तिरेको जियो मिनिरल प्रालिले खरी रहेका जग्गाधनीहरुलाई भने ६० रुपैयाँ दिएको छ ।
दुहू गाउँपालिका वडा नम्बर ५ धारीका हरमल शाहु, मानबहादुर बम र हर्कबहादुर बम तीन जना स्थानियहरुको जग्गामा खरी खानि रहेको छ । तीनै जनाको जग्गामा उक्त जियो मिनिरल प्रालिले खरी उत्खनन गरे बाफत् प्रति बोरा ३ रुपैयाँका दरले मुआब्जा दिने गरेको छ ।
प्रालिले प्रतिटन खानी विभागमा १ सय ८० प्रतिशत कर तिरीरहेको छ भने सोही रकमको २० प्रतिशत स्थानिय सरकार अर्थात् दुहू गाउँपालिकालाई कर तिरी रहेको छ । तर जग्गा धनीत्रयले भने सबै भन्दा कम रकम मुआब्जा पाइरहेका छन् ।
यसरी जग्गाधनीहरुले थोरै मात्रामा मुआब्जा पाएपनि ३५ जनासम्म कामदारहरुले भने स्थानिय स्तरमै राजगारी पाएका छन् । भारतका विभिन्न ठाउँमा गई काम खोज्नु पर्ने नेपाली कामदारहरुकाले स्थानियस्तरमै काम पाएको स्थानिय शिक्षक लोकेन्द्र बमले जानकारी दिनुभयो । भारतमा गएरपनि काम नपाइने अवस्था आएका बेला स्थानिय स्तरमै काम पाउँदा कामदारहरु भने खुशी भएका छन् । तर जग्गा धनीहरुले भने थोरै मुआब्जामै चित्त बुझाइ रहेका छन् ।
असार महिनादेखि खरी उत्खनन कार्य बन्द
२ सय टन खरी निकासी गरी सकेको जियो मिनिरल प्रालि कञ्चनपरुले अहिले उत्खनन कार्य बन्द गरेको छ । वर्षाका कारण खानी उत्खनन कार्य प्रभावित हुने भएपछि असार २२ गतेदेखि उत्खनन कार्य बन्द गरेको जियो मिनिरल प्रालिका निर्देशक डाक्टर सुरज प्रसाद भट्टले बताउनु भयो ।
वर्षाका कारण निकालीएको खरी भिज्ने, खरीको रङ बिग्ग्रीने जस्ता समस्याका कारण असार २२ गतेदेखि उक्त प्रालिले खरी उत्खनन कार्य बन्द गरेको हो । वर्षा रोकिएसंगै भदौको महिनाबाट खरी खानी उत्खनन् अर्थात् खरी निकाल्ने काम गरिने जियो मिनिरल प्रालि कञ्चनपुरले जनाएको छ । खरी खानी बन्द भएपछि उक्त खानीमा काम गरीरहेका कामदारहरुले पनि फुर्सदमा बस्नु परेको छ ।
दैनिक सय टन खरी निकाल्ने लक्ष्य राखेको उक्त प्रालिले अहिले सुरुवातीमा ३ देखि ५ टन खरी निकाल्ने गरेको छ । खरी खानीमा काम गर्ने कामदारहरु ३५ जनासम्म भएपनि लक्ष्य अनुसार खरी निकाल्न सकिएको छैन । अहिले दैनिक ३ देखि ५ टन खरी उत्पादन भइरहेको जियो मिनिरल प्रालिले जनाएको छ ।
खलंगा बजारमा तरकारी र खाद्यान्नको मूल्य घट्यो, ग्याँसमा २५ रुपैँयाले मूल्य बृद्धि।।
दार्चुला समाचार ,, पछिल्लो सयम दार्चुला बजारमा तरकारी र खाद्यान्नको मूल्य घटेको छ भने ग्याँसको मूल्य २५ रुपैँयाले बढेको छ । दार्चुला बजारको मूल्य
स्थानीय सरकारमा पनि विस्थार हुन सबै सहकारीहरुलाई नगर प्रमुख भट्टको अग्रह ।।
दार्चुला समाचार,, दार्चुला जिल्लामा रहेका सबै सहकारीहरुलाई स्थानीय तहमा गई सबैजनतालाई सेवादिने खालको काम गर्न सबै सहकारीहरुलाई महाकाली नगरपालीकाका
अल्लो प्रसोधन मेसिन र भवन हस्तान्तरण, , अल्लो उत्पादन बजारीकरणमा जोड। ।
दार्चुला समाचार , नौगाड गाँउपालिकाको वडा नम्बर २ गोधानीमा लघु उद्यमीहरुलाई अल्लो प्रसोधन मेसिन र भवनहरु आज हस्तान्तरण गरिएका छन् । उद्योग
निर्देशिका विपरित यार्सा संकलनको निर्णय, अपिनाम्पा र गाँउपालिका दुबैले कर नउठाउने सहमति !
नयाँ नेपाल समाचार दार्चुला । दार्चुलामा जेठ ६ गतेको एक बैठकले यार्सागुम्बा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७३ को व्यवस्था विपरित निर्णय गरेको छ । जिम्मेवार